Shooting Game လေးရေးရအောင် | our notes for our youngers
Shooting Game လေးရေးရအောင်	Filed under: Program လေးတွေ ရေးကြရအောင်..., Window Form Application — Tags: .NET, C#, exercise, game, programming, Window Form Application — sevenlamp @ 10:02 AM Shooting the best…. ( Exercise Two )
ကျွန်တော်တို့ လေ့ကျင့်ခန်းလေး နောက်တစ်ခု အနေနဲ့ သေနတ်ပစ်တဲ့ ဂိမ်းလေး ရေးကြရအောင်။ ဒီဂိမ်းလေးမှာ Timer Control ကို အဓိကသုံးထားပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက Form ပေါ်မှာ key နှိပ်တဲ့ event မှာ user နှိပ်တဲ့ key ကို ပြန်စစ်တဲ့ အလုပ်လေးလည်း ပါတာပေါ့။ ဒီ ၂ ချက်ထဲပဲ သေချာသိဖို့လိုပါတယ်။ အိုကေ… အားလုံးပဲ စမ်းရေးကြည့်ကြပါဦး။ ထုံးစံ အတိုင်း နောက်တစ်ပါတ်မှာ source code ကိုတင်ပေးပါ့မယ်။ လောလောဆယ်တော့ exe file လေးကို ဒေါင်းပြီး runကြည့် play ကြည့်ကြပါဦး။
Thanks you so much as the following proverb i feel that “If you catch meafish, I shall not go hungry today;
but if you teach me to fish, I shall never go hungry.”
Therefore i shall never forget everything so on.
Comment by Nway73 — November 27, 2009 @ 10:02 AM Reply	thanks you for your comment.
Comment by sevenlamp — November 30, 2009 @ 11:11 AM Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI